2016 ~ SAI SENG SERK
ခွန်ဆာ သျှာမ်းလူမျိုးများအပေါ် အကြွေး တင်သွားပါပြီ
7:01 AMShan State Army
တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို. သျှာမ်းပြည်တွင်းက လက်နက်တိုင်းရင်းသားများ သည် MTA က အင်အား အတောင်.တင်းဆုံး ပါပဲခ။ ဒါပေမဲ. စစ်ရေးပဲ ရှိတာ နိုင်ငံရေး မရှိတော. ဘယ်လောက်ပဲ တောင်.တင်း နေပါစေ တစ်နေ.ကြရင် ပြိုလဲ သွားမှာပါပဲ။ အဲကြောင်. ကျွန်တော်တို. RCSS/SSA Lead ခေါင်းဆောင် စ၀်ရွက်ဆစ်က နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး Federalism and Democracy သွားလေ.လာရတာပေါ.။ ဒါကလဲ လူတိုင်းသိကြပါပြီ စစ်ရေး တစ်ခုပဲနဲ. သွားလို.မရဘူး နိုင်ငံရေး ပါမှ ဆိုတာ။ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို. ၁၉၉၂ တုန်းက ခွန်ဆာ ဦးဆောင်တဲ. MTA သည် စစ်အင်အား လက်နက်အင်အား လူအင်အား အပြည်.ရှိနေတာ ဗမာအစိုးရ ဖက်က သေနတ် တစ်ချက်မှ မပေါက်ပဲနဲ. တစ်လအတွင်း လူအင်အား လေးငါးသောင်း ပျ က်စည်းသွားတာ။ ခွန်ဆာ ၏စကားအမြဲမြဲ ပြောနေတာက စစ်တပ်. တစ်ခု တစ်ဖွဲ. ရှိလာရင် အဓိက ကတော. ငွေရှိဖို.ပဲ လို.။သူအမြဲမြဲပြောနေတာ ငွေရှိရင် သျှာမ်းပြည်လဲ တိုးတက်မယ် သျှာမ်းလူမျိုးလဲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမူ.က နေရုန်းထွက်နိုင်မယ်လို. ဒါကသူ.၏ ခံယူချက်ပေါ. ကျွန်တော်တို. လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များ အများစုသည် သူ.ခံယူချက် ကိုယ်.ခံယူချက်နဲ. တော်လှန်လာကြတာ။ စ၀်ကွမ်းဆေးြ ကတော. သူ.၏အမြင်သည် သျှာမ်းပြည်သူလူထုများ အမြင်ကြည်ဖို.လိုတယ်။ စ၀်ဆိုင်စစ်ကြတော. သျှာမ်းလူမျိုးများ ပညာတတ်များများရှိဖို.လိုတယ်။ စ၀်နွဲ. ကြတော. နိုင်ငံရေး များများတတ်ဖို.လိုတယ် ။ ဒီလိုနဲ.ပဲ ဒီလေးဦးပာာ သျှာမ်းတပ်.မတော်ကို ဦးဆောင်လာပြီး ခွန်ဆာ ဦးဆောင်မှ လုံးလုံး ကိုပျက်စီးသွားတာ။ အခုကျွန်တော်တို. တောင်ပိုင်းသျှာမ်းတပ်.မတော် စ၀်ရွက်ဆစ်ကြတော. လူအင်အား တောင်.တင်းဖို.လိုတယ် လူအင်အား စစ်အင်အားတိုးပွားများရင် နိုင်ငံရေး စကားများများမပြောရဘူးလို. သူအမြဲမြဲပြောနေတာ ၊ နိုင်ငံရေး ဆိုရင်လဲ အားလုံး Very good ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ သူအမြဲမြဲပြောနေတာ။ ဒါကျွန်တော်တို. ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးနဲ. တစ်ဦး၏ ခံယူချက်ပေါ.ခ။ဒါပေမဲ. ဒီနေရာလေးမှာ ပြီးခဲ.တဲ. အတိတ် Mong Tai Army (MTA) ခေါင်းဆောင် ခွန်ဆာ သည် ကျွန်တော်တို. သျှာမ်းပြည်သူလူထု သျှာမ်းလူမျိုးများ၏ အကြွေး တင်သွားပါပြီ။ ခွန်ဆာ ဆိုတာ တစ်ချိန်က အရက်ခွက် ကိုင်ပြီဆိုရင် သူ.ပါးစပ် ကနေအမြဲမြဲထွက်လာတဲ. စကားတစ်ခွန်းရှိတယ် အရက်ခွက် ကိုင်ပြီး မိုးပေါ်မြောက်လိုက်ရင် (မိုင်းတိုင်း ကွမ်းခေါ် Tai Freedom) ဆိုပြီး သုံးခါ သုံးကြိမ် အော်အော် လေ.ရှိတယ်။ဒါပေမဲ. သျှာမ်းမိဘ ပြည်သူများ သူ.ကိုယုံကြည်လာခဲ.တာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလို.ထင်ပြီး လုံးလုံးကို မှားသွားပါပြီ။ နောက်ဆုံး ရန်ကုန်မှာ ၂၀၀၆ တုန်းက ခွန်ဆာ ဆုံးသွားပြီလို. သတင်းကြားလိုက်ရတော. ဘာရောင်္ဂါနဲ.လဲ ဆိုတာတောင် အဖြေက မရှိခဲ.ပါဘူး။ တစ်ချိန်က ခွန်ဆာ ဆိုတာ သျှာမ်းပြည်ကလူတိုင်း သိသိကြတယ် လူတော.မမြင်ဖူးပါဘူး နာမည်တော.Popular ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို. ရရှိတဲ. အခွင်.အရေးကို မသုံးတတ်ဘူး အဲကြောင်. ခွန်ဆာသည် ကျွန်တော်တို. သျှာမ်းပြည်သူလူထုများနဲ. လက်ကျန် တပ်.မတော်သားများ အားလုံး ကို သူက သစ္စာဖောက်သွားပြီ။ အဲကြောင်. သျှာမ်းလူမျိုး အကြွေးရှင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ အခုလက်ရှိ သွားနေတဲ. နိုင်ငံရေးသည် ဘယ်တပ်.မတော် မဆို တောင်မြောက် ခေါင်းဆောင်များ အားလုံးလဲ ထိုနည်းပါပဲ သတိရှိရှိနဲ. ရှေ.လျှောက်ကြပါ။ ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်တိုက်ပြီး Freedom ရသွားတယ်ဆိုတာ ၄၅ နိုင်ငံပဲရှိတာ နောက်ဆုံး နိုင်ငံရေး နဲ.ပဲ ပြီးဆုံးသွားကြတာ အများကြီးပါပဲ။ လွတ်လပ်တဲ. နိုင်ငံ တစ်ခုတည်ထောင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ လေး ခုရှိဖို.လိုအပ်ပါတယ်ခ ၊ တစ်. လူဦးရေ (Population) ၊ နှစ်. ပြည်နယ် ( Land and Territory ) ၊ သုံး . အစိုးရ ( Government) ၊ လေး . အာဏာ ( Sovereignty ) ၊ ဒီလေးခုရှိရင် International နိုင်ငံများက အသိမှတ်ပြုပြီး Freedom and Liberation ပေးလိုက်ပြီ။ ဒီလေးခုထဲမှာ ကျွန်တော်တို. သျှာမ်းက ဘာမရှိသလဲလို. ကြည်.လိုက်ရင် နံပါတ်လေး အာဏာ (Sovereignty) နဲ. နံပါတ်သုံး အစိုးရ (Government) ပါပဲ။ တခြားတိုင်းရင်းသား ကြည်.မယ်ဆိုရင် ဥပမာ - ၀ တပ်.မတော်လိုမျိုးဆိုရင် Land and Territory မရှိပါဘူး ပြီးတော. Population အပြည်.အ၀ မရှိခဲ.ပါဘူး အဲကြောင်. Freedom နိုင်ငံမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပြည်နယ်တစ်ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင် တစ်ဆတ်ထဲဖြစ်ရမယ် ပိာုနေရာမှာ တစ်ကွက် ဒီနေရာမှာ တစ်ကွက် မဖြစ်ရဘူး။ဒါက ကျွန်တော်တို. ပြည်ထောင်စု Constitution 2008 ထဲက သတ်မှတ်ထားတာတွေ.ရပါတယ်။ အဲကြောင်. တစ်ချိန်က MTA ဆိုတာ အားလုံး Completely ဖြစ်ခဲ.တယ် ရှိခဲ.တယ် ဒါပေမဲ. နိုင်ငံရေး ရှေ.ပြေးမရှိတော. ကွဲသွား ရော။ အဲကြောင်. ပြီးခဲ.တဲ. အတိတ်ကို ပြန်စမ်းစစ်ကြည်.ရင် ဒါ သင်ခန်းစာ တစ်ခု ယူသင်.ပါပြီ။အားလုံးပဲ သျှာမ်းခေါင်းဆောင်များနှင်. သျှာမ်းပြည်သူလူထုများ အားလုံး ကံကောင်းပါစေ မိုင်ဆွန်ခ
ကျွန်တော် ဒီစာလေးမရေးခင် အရင်ဆုံး နားလည်ခွင်.လွတ်ပေးပါလို. တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခ။ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် သျှာမ်းပြည်နယ် တပ်.မတော် တောင်ပိုင်းကို ပိုပြီးတော. Perfect ဖြစ်အောင် Advise လေးပေးချင်ပါတယ်ခ။ကျွန်တော်တို. သျှာမ်းပြည်သူလူထု များအားလုံးသိကြပါတယ်ခ။ သျှာမ်းပြည်နယ်တပ်.မတော်တောင်ပိုင်း RCSS/SSA လွယ်တိုင်းလျန်း စစ်တပ်. ဆိုတာ ဘယ်တော.အခါမှ ဗမာအစိုးရ စီကို အားလျှော.ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်တာမပာုတ်ပါဘူး နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်မှာ ဒီတစ်ခါသည် President ဦးသိန်းစိန် တက်လာပြီး Transition လုပ်မှ လွယ်တိုင်းလျန်း ဆိုတာ Govet: နဲ. Ceasefire လုပ်တာ။ ငါးနှစ်အတွင်း သျှာမ်းပြည်တပ်.မတော် တောင်ပိုင်းကလဲ စစ်အင်အား အစပေါင်းများစွာ တိုးလာတာလဲ တွေ.ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ. ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း တစ်ယေက်က ရင်ဖွင်.လာ တာတော. တွေ.ရပါတယ်။ RCSS/SSA ၏ဆက်ဆံ ရေးရုံးသည် ပြည်သူလူထုနဲ. ဆက်ဆံရေး လုပ်တဲ. နေရာမှာ နဲ.နဲ. Complete မဖြစ်ဘူးလို.တွေ.ရပါတယ်။တစ်ချိန်က SSA လာလုပ်မယ်လို. ဆက်ဆံရေး ရုံးမှာ ဆက်သွယ်တော. E-mail ထဲကို ကိုယ်ရေးရာဇာဝင် Profile ပို.ပေးပါလို. သူတို.ကတောင်းဆိုတော. ကိုယ်ကပို.လိုက်တာ ပို.ပေးတော. သုံးလေးလ ရှိပြီ ပြန်ပြီးတော. အကြောင်းမပြန်လာပါဘူး။ ကိုယ်.လူမျိုး ကိုယ်.နိုင်ငံ ကိုယ်ပြည်နယ်ကို ချစ်မြတ်နိုးလို. အသိတရားနဲ. သျှာမ်းပြည်တပ်.မတော်ထဲ ၀င်လာဖို. အရမ်းခက်ခဲ ခဲ.ပါတယ်။ ချင်းမိုင်ရုံးကို သုံးလေးခါ Viber စာနဲ.လဲ ပို.သွားတယ် မန်းလေးကနေ လွယ်တိုင်းလျန်းကို လာချင်ရင် ဘယ်လို ချိပ်ရမှာလဲ ပြီးတော. ချင်းမိုင်က နေ၀င်သွားမယ်။အကြောင်းပြန်ပါလို. အကြိမ်ကြိမ် အနူံအညံ. တောင်းဆိုနေတာနဲ. RCSS/SSA ချင်းမိုင် ဆက်ဆံရေးရုံး စိုင်းဆိုင်မိန်းစီ ပို.ခဲ.တော်လဲ ထိုနည်းပါပဲ။အကြောင်းမပြန်ခဲ.ပါဘူး နောက်ဆုံး စိတ်မရှည်တော. ပြောထည်. လိုက်တယ် သျှာမ်းပြည်တပ်.မတော်ကို လာလုပ်မယ် လာရာ.မယ်.လမ်း လာရာ.မယ် ခရီး ဘယ်လိုလာရမလဲ ပဲပြောပြပါ ငွေရေး ကြေးရေး မလိုပါဘူး ကိုယ်.စားရိတ်နဲ. ကိုလာမယ်လို. ပြောတော်လဲ ထိုနည်းပါပဲ အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ. ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်းက စိတ်မရှည်တော. သျှာမ်းပြည်နယ်တပ်.မတော် မြောက်ပိုင်း စီကို ၀င်လိုက်တာ။ ဒါကတော. ကျွန်တော်. သူငယ်ချင်း စိုင်းလောဝ်ဆိုင် ၏ ရင်ဖွင်.စကားပါပဲ။ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် နဲ.နဲ. အကြံ Advise ပေးချင်ပါတယ် တကယ်ရိုးသားပြီး တကယ်ဝါသနာပါပြီး လုပ်ရင် ယုံကြည်မူ. ဆိုတာ လုံးဝ မရှိခဲ.ပါဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရင် ကျွန်တော်တို. သျှာမ်းလူမျိုးများသည် စုံထောက် လို.ပဲ ထင်ထင်နေကြတာ။ ဒါက တကယ် Over Thinking ပါပဲ လုံးဝ ကိုအမြင်ကျင်းလွန်းပါတယ်။ ဒီစာ ကိုရေးရတဲ. အကြောင်းကလဲ RCSS/SSA အဖွဲ.သားများ အားလုံး သိစေချင် မြင်စေချင် လို.ရေးလိုက်ရတာပါ။ ဆက်ဆံရေးရုံးက လူတွေက အလုပ်များတယ်လို.လဲ ထားလိုက်ပါ သုံးလေး လလောက်ကြာသွားတာ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ တန်ဖိုး မရှိသလိုလိုဖြစ်နေတာ။ ကျွန်တော် စစ်သင်တန်းတက်တုန်းကလဲ ထိုနည်းပါပဲ SSA လုပ်ချင်ရင် ဒီဖုန်းကိုဆက်ပါ ဒီ အီးမေးလ် ကို Contact ပါလို. သူတို.က ပြောပြောနေတာပါပဲ တကယ် ဆက်သွယ်တော. အရေးမထားကြပါဘူး။ အဲကြောင်. ဖြစ်နိုင်ရင် All Okay ဖြစ်အောင် ပြန်ပြီးတော. Reflection လုပ်ပေးပါလို. တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခ။ဒီလိုဖြစ်တာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ မပာုတ်ပါဘူး ရေတွက်လို. မရတော.ဘူးလို. သတင်းရရှိထားပါတယ်ခ။ မိုင်ဆွန်ခ ... . . . .
ယွꨓ်ꨵသင် သိုꨀ်းတꨯး ပွတ်းꨅꨤတ်း ꨬလꨳ ပီꨳꨓွင်ꨵသိုꨀ်းလွꨯပꨱꨓ်ပꨤင်တိုꨀ်းꨀꨓ်
ထိုင်မုးꨓ်ꨮးꨁꨤဝ်းတꨤင်းပီꨶꨓꨯꨵ သိုꨀ်းတꨯး ပွတ်းꨅꨤတ်း လွꨯတꨯးလꨰင်း ꨬလꨳ ပီꨳꨓွင်ꨵသိုꨀ်းလွꨯꨁဝ်
ပꨱꨓ်ပꨤင်တိုꨀ်ꨳꨀꨓ် ယွꨓ်ꨵသင် သိုꨀ်းလွꨯတꨯးလꨰင်း RCSS/SSA ꨁဝ်မိူဝ်ꨳꨕွင်းယꨤမ်း သွꨓ်ꨀꨤꨓ်
သိုꨀ်းတီꨳလွꨯတꨯးလꨰင်းယဝ်ꨵ သေပွꨀ်ꨳမိူဝ်းꨓꨯꨵ ꨉုးပီꨓွင်ꨵသိုꨀ်းလွꨯꨁဝ်ယိုဝ်း ။ တီးꨓꨯꨵ ပေုးꨡဝ်
တꨤင်းꨟꨓ်ထိုင်ꨀဝ်ꨲꨁုꨳလꨤတ်ꨳတေꨵ ယွꨓ်ꨵသိုꨀ်းတꨯး လွꨯတꨯးလꨰင်း RCSS/SSA ꨁꨮꨤင်ꨓုꨳလိꨓ်သိုꨀ်းꨬလꨳ ပꨱꨓ်ꨀူꨉ်းယဝ်ꨵ။ ယွꨓ်ꨵꨓꨓ် ꨅွင်ꨲပꨱꨓ်ပꨤင်တိုꨀ်းꨀꨓ်။ ပူꨓ်ꨵမုး သွင်လိူꨓ်ꨓꨯꨵ ပီꨳꨓွင်ꨵသိုꨀ်းလွꨯတꨯးလꨰင်း 701 ꨁဝ် ပွꨀ်ꨳမိူဝ်းꨁိုꨓ်း ထူꨀ်ꨳꨉုး ပီꨳꨓွင်ꨵသိုꨀ်းလွꨯꨁဝ်ꨉုး ယိုဝ်းꨬလꨳ လူꨵꨀꨮုꨲ2ေꨀုꨵ ယဝ်ꨵ ꨉုး ꨉွပ်း4ေꨀုꨵ။ သိုꨀ်းလွꨯ ꨁဝ်ယူꨲလꨯꨳယူꨲ ဝꨓ်းမိူဝ်ꨳꨓꨯꨵꨓꨓ်ꨵ တင်းလင်မꨓ်း သမ်ꨵမီးꨕ်ꨮ ꨕ်ꨮသမ်ꨵ ပꨓ် ꨟꨰင်းꨁဝ်။ ပေုးမုးတူꨉ်း ပီꨳꨓွင်ꨵလွꨯ ꨓꨯꨵꨡမ်ꨲ လူင်းလꨤꨯးမိုဝ်း ပုးꨅွမ်းꨓ်ꨮး NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) ပေုးတူꨉ်းလီလီꨓꨯꨵ တꨤင်းလင်ꨁဝ် ꨀူꨓ်းပꨓ်ꨟꨰင်းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ်သိုꨀ်း ꨁꨤင် KIA/KIO ယဝ်ꨵ။မိူဝ်ꨳပူꨓ်ꨵမုးꨅိူဝ်းꨓꨓ်ꨵ ꨅုမ်းသိုꨀ်းꨁꨤင် ꨁဝ်ꨀꨯꨵꨀꨯꨵလꨤတ်ꨳဝုꨳ ꨁꨯꨳꨡုမ်လွင်ꨳငမ်းယꨱꨓ်ꨬလꨳ ꨁꨯꨳလꨤတ်ꨳꨀꨤꨓ်မိူင်း (Peace and Political Dialogues) ထိုင်မုး ꨀမ်း NCA ꨓꨯꨵသမ်ꨵ ꨟꨱတ်းသင်ꨁဝ်သမ်ꨵ ꨡမ်ꨲ ꨁဝ်ꨳပုးလု ??? ပေုးတူꨉ်းꨀꨮုꨲတူꨉ်းမုး လꨤꨯးသိုꨀ်းꨁꨤင် ꨟꨱတ်းꨅိူဝ်ꨵꨓꨯꨳꨓꨯꨵ ꨁꨯꨳꨟꨮ်ꨳ မꨓ်းပꨱꨓ် ꨀူꨓ်းꨅꨤဝ်းꨁိူဝ်းꨓင်ꨀꨓ် ꨕိတ်းမေုးꨀꨓ်ယဝ်ꨵ (Public War) ပေုးꨡဝ်တင်းꨟꨓ်ထိုင်ꨁုꨳလꨤတ်ꨳတေꨵ သင်ဝုꨳပꨱꨓ်မိူင်း Democracy မုးတေꨵတေꨵ ꨓꨯ သꨤမ်ပူꨓ်ꨓꨯꨵ သွင်ပူꨓ် ပꨱꨓ်တꨯး ယူꨲဝꨯꨵ ယဝ်ꨵ ꨓ်ꨮးမိူင်းꨁꨤင်။ ပေုးꨟꨱတ်း Election မုး မိူင်းꨁꨤင် ꨓꨯꨵ ꨁꨤင် ꨡမ်ꨲ ပꨱꨓ်ꨁုꨓ် ယဝ်ꨵ တꨯးꨟဝ်းသမ်ꨵ တေပꨱꨓ်ꨁုꨓ် ယွꨓ်ꨵꨓꨓ် ယဝ်ꨵ ꨁꨤင် ꨁဝ်ꨡမ်ꨲ ꨁꨯꨳ ꨁဝ်ꨳပုး ꨓ်ꨮး NCA တုꨲတေꨡုမ် ꨀꨤꨓ်မိူင်း ။ ꨓꨯꨵတေꨵ ပꨱꨓ်တင်းꨟꨓ်ထိုင်ꨁုꨳယဝ်ꨵ။တေုꨲထိုင် ဝꨓ်းမိူဝ်ꨳꨓꨯꨵ ပီꨳꨓွင်ꨵ သိုꨀ်းလွꨯꨁဝ် ယူꨲလꨯꨳေꨀုꨳ ယွမ်ꨵ ပီꨳꨓွင်ꨵ သိုꨀ်းꨁꨤင်ꨲ ꨁဝ်မီးတင်းလင်ယဝ်ꨵ။တူꨉ်းꨬလꨳ မိူင်းတꨯးပွတ်းꨟွင်ꨳ ꨟဝ်းသိုꨀ်းꨁꨤင် မုးꨡဝ်ꨀꨮုꨲ ꨟꨱတ်းသိုꨀ်းꨁဝ် သမ်ꨵꨡမ်ꨲ ꨡဝ်ꨁဝ်ꨳꨓ်ꨮးꨅုမ်း သိုꨀ်းလွꨯ သမ်ꨵ သူင်ꨲပꨓ် သိုꨀ်းꨁꨤင်တိꨀ်းတိꨀ်း ꨓꨯꨵ ꨁꨯꨳပွင်ꨲဝုꨳပꨱꨓ်ယွမ်ꨵသင်လု ???? ယဝ်ꨵေꨀုꨳ သူပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်း ယုꨲပေလိုမ်း မိူဝ်ꨳ 1947 ꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ်းသူမ်းꨀꨮုꨲ သင်လꨤꨯလꨤꨯ သူꨅဝ်ꨳ ꨅွင်ꨲꨟူꨵꨟုး ???? ထီꨵꨓိုင်ꨳꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ်းသူမ်း မိူင်းတꨯး ပꨓ်မိူင်းꨁꨤင် မိူဝ်ꨳဝꨓ်းထီꨵ 27.1.1947 ꨡိူဝ်ꨳ ꨓꨯꨵꨵ လူး ꨅွင်ꨲ လုꨀ်ꨳလုꨀ်ꨳလꨤꨓ်ꨳလꨤꨓ်ꨳ ꨟဝ်းသမ်ꨵ ꨟူꨵꨟုး မိူဝ်ꨳꨀူꨳပွꨀ်ꨳꨓꨯꨵ မိူင်းꨁꨤင်ꨲ ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ် ꨓုꨳတီꨳ ꨡုပ်ꨵပိုင် ꨅဝ်ꨳꨘုꨵမိူင်းမိတ်ꨲ ။ ယွမ်ꨵꨟဝ်း ꨡမ်ꨲမေုဝူꨓ်ꨵ ꨡမ်ꨲ မေုတူꨉ်းꨅွမ်းငဝ်းလꨤꨯးꨬလꨳ ထီꨵသွင် မုး သူမ်းပꨓ် သုꨓ်လꨯꨳꨟဝ်း (Demand) ꨬလꨳ ပꨱꨓ်ꨁီꨳꨁုꨳ ပိူꨓ်ပꨰတ်ꨳယဝ်ꨵတေုꨲထိုင်ဝꨓ်းမိူဝ်ꨳꨓꨯꨵꨯ ယဝ်ꨵ။ထိုင်မုးꨀမ်းꨟဝ်း မိူင်းတꨯး ယုꨲပေ ꨟꨮ်ꨳမꨓ်းသူမ်းပꨓ် ပီꨳꨓွင်ꨵလွꨯꨁဝ်ထꨰင်ꨳလု ။ယွမ်ꨵꨓꨯယဝ်ꨵ ꨅဝ်ꨳꨟူဝ်ပဝ်ꨳ RCSS/SSA (Restoration Council Shan State / Shan State Army ) ꨟဝ်းꨟꨤင်ꨳꨟꨰꨱင်းသိုꨀ်းဝꨯꨵ ꨟꨮ်ꨳသိုꨀ်းတꨯး ꨟဝ်းမီးꨓမ် ꨟꨮ်ꨳꨡꨰꨓ်ꨟꨰင်းꨟဝ်း မီးꨓမ်။ ပေုးꨟဝ်းꨡမ်ꨲ မီးꨟꨰင်းသိုꨀ်း ပေုးꨟဝ်းꨡမ်ꨲ မီး ꨡုꨲꨓု ꨓꨯꨵ ꨟဝ်းꨁꨯꨳꨟꨱတ်းသင် ꨟꨱတ်းꨡမ်ꨲ လꨯꨳ ꨡုꨲꨓု ꨓꨯꨵေꨀုꨳ ꨡမ်ꨲ ꨅ်ꨮꨳတု ꨅ်ꨮꨵꨀိꨓ် တေုꨲꨀူꨓ်းမိူင်းတꨯးꨟဝ်း တေလꨯꨳꨅ်ꨮꨵꨀိꨓ် တီꨳꨕူꨳꨁꨰꨓ် ꨟဝ်းယဝ်ꨵ။ꨀွပ်ꨳꨓꨯ သူꨅဝ်ꨳ မီးတင်းꨟူꨵသင် မီးပိင်ꨉုꨲ သင်ေꨀုꨳ ꨁဝ်ꨳမုးꨟꨱတ်းသိုꨀ်းꨬလꨳ ꨅွမ်းလူꨉ်ꨳꨓပ်ꨵꨀတ်ꨵ သူမီး။ꨀွပ်ꨳꨓꨯ ယုꨲပေꨀူဝ်ꨟꨱတ်းသိုꨀ်း ယုꨲပေꨀူဝ်တုꨀ်ꨵ ယုꨲပေꨀူဝ်တꨤꨯ သင်သူꨡွꨓ်ꨀꨓ်ပꨯꨤꨳꨡွꨀ်ꨲ မိူင်းတꨯးꨟဝ်းꨀꨮုꨲတိꨀ်းတိꨀ်း ꨅꨤဝ်းꨁိူဝ်းလꨱꨂ်ꨵ ယဝ်ꨵ တေပꨱꨓ်ꨁုꨓ် ꨀူꨓ်းꨁိုဝ်းပိူꨓ်ယဝ်ꨵ တေပꨱꨓ် ꨁမ်း ꨟဝ်းသမ်ꨵ တေပꨱꨓ် ꨁီꨳꨁု ပိူꨓ်တိꨀ်းတိꨀ်းယဝ်ꨵ။တူꨉ်းꨬလꨳ ပီꨓွင်ꨵလွꨯꨁဝ်ꨓꨯꨵ ꨁဝ်မုးတေတꨤင်ꨲ တပ်ꨵသိုꨀ်း TNLA ꨓꨯꨵ တိုꨀ်ꨵမီးမုး5ပီပꨤꨯꨀူꨉ်း ꨡꨰꨓ်ꨳꨟꨰင်း ꨁဝ်ꨓꨯꨵ ထိုင်တီꨳ ဝုꨳꨅုမ်းသိုꨀ်းမꨤꨓ်ꨳေꨀုꨳ ꨡမ်ꨲ ꨡဝ်ꨁဝ်ꨳပꨰတ်ꨳꨀꨮုꨲ ငꨤꨯငꨤꨯ ယွꨓ်ꨵ သင် ꨡꨓ်ဝုꨳꨓꨓ်ꨵ ꨀူꨓ်းမီးပꨤꨯးꨟူꨵꨁဝ် ꨬလꨳ ပီꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်း ဝူꨓ်ꨵတူꨉ်းꨬလꨳ။တေုꨲထိုင်ဝꨓ်းမိူဝ်ꨳꨓꨯꨵ သိုꨀ်းလွꨯ ꨁဝ်ꨡမ်ꨲꨁိုꨓ်းသူင်ꨲ ꨀူꨓ်းသိုꨀ်းတꨯးꨟဝ်းꨬလꨳ ပေုꨳꨬမꨳ ꨀူꨓ်းမိူင်းတꨯး ꨟဝ်းမုး။ ထိုင်မုးꨓ်ꨮးꨁꨤဝ်းတꨤင်းပီ ꨓꨯꨵ ꨅဝ်ꨳꨟူဝ်ပဝ်ꨳ RCSS/SSAေꨀုꨳ ꨅွင်ꨲလꨯꨳဝꨮꨤင်းꨕꨰꨓ်ꨳသေ ꨓ်ꨮးꨡꨓ် RCSS/SSA ꨀူမ်းလꨯꨳꨓꨯꨵ ꨕ်ꨮတေꨡမ်ꨲ လꨯꨳꨉွပ်းꨟꨱတ်းသိုꨀ်း ။ ဝꨤꨯးသိုꨀ်း လွꨯတꨯးလꨰင်း ꨟဝ်းꨀိုတ်း ယိုဝ်းယဝ်ꨵေꨀုꨳ ꨡမ်ꨲꨉွပ်းသိုꨀ်းတီꨳလ်ꨮ ꨡမ်ꨲယွꨓ်းꨀူꨓ်းသိုꨀ်းတီꨳလ်ꨮယဝ်ꨵ ။ ယွꨓ်ꨵဝုꨳ မိူဝ်ꨳလꨱဝ် ꨀူꨓ်းမိူင်းꨟဝ်း မီးꨟူ မီးတု ꨬလꨳ ပွင်ꨲလꨰင်း မုးသေ လိူဝ်သေဝုꨳ မုးꨟꨱတ်းသိုꨀ်း တူဝ်ꨅ်ꨮꨕ်ꨮမꨓ်း ꨟင်းꨀူꨉ်း။ ꨀွပ်ꨳꨓꨯ ပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်း လူဝ်ꨟူꨵꨀꨤꨓ်မိူင်း ꨓမ်ꨓမ် ပေုးပꨱꨓ်သိုꨀ်း မုးꨟꨱတ်းသိုꨀ်းေꨀုꨳ လူဝ်မေု ꨀꨤꨓ်သိုꨀ်း ꨓမ်ꨓမ်။လꨤꨯးတိုꨀ်းမီးလꨤꨯမꨱဝ်း လꨤꨯလေုတပ်ꨵသိူဝ်ꨘꨯးပꨱꨓ်ꨅိူဝ်ꨵꨟိုဝ် ꨅိူဝ်းꨀꨮုꨲꨀူꨳလွင်ꨳလွင်ꨳ ꨓꨯꨵ ပေုꨳꨬမꨳ ꨀူꨓ်းမိူင်းတꨯး ꨟဝ်းေꨀုꨳ ထူꨀ်ꨲလီ ꨟူꨵဝꨯꨵ ယဝ်ꨵ ꨀꨤꨓ်သိုꨀ်းေꨀုꨳ။ မ်ꨮꨲသုင်ꨁုꨳ သင်ဝုꨳꨁုꨳတꨰမ်ꨳလိꨀ်ꨳတꨯး ꨕိတ်းꨀꨮုꨲ ဝꨮꨤင်းꨁꨮꨤင်းပꨓ်ꨁုꨳꨡိတ်းꨓိုင်ꨳ ꨟꨀ်ꨵပီꨳꨓွင်ꨵတꨯး ꨬလꨳ မိူင်းတꨯးꨁုꨳ။
*** လွယ်တိုင်းလျန်းက Children Day နေ. ***
ဒီနေ. ၁၀.၁.၂၀၁၆ ကျရောက်တဲ. ကလေးများနေ.ကို ကျွန်တော်တို. RCSS/SSA လွယ်တိုင်းလျန်း ငှာနချုပ်မှာ စီစီကားကား ကျင်းပ ခဲ.ပါတယ်။အဲပွဲကို တက်ရောက်လာသူ စုစုပေါင်း လူအင်အား ခြောက်ထောင်ကျော် လာရောက် လည်ပတ်ကြပါတယ်ခ။အဲထဲက ထိုင်းနိုင်ငံက မိတ်ဆွေများက တစ်ေ ထာင် လုနီးပါး တက်ေ၇ာက်လာတာကိုတွေ.ရပါတယ်ခ။ ကလေးများနေ. ပွဲကို စ၀်စိုင်းယီ ဦးဆောင်ပြီး အဖွင်.စကားလာရောက် ပြောကြားပါတယ်ခ။
အဲထဲက ကျွန်တော်တို. သျှာမ်းလူမျိုးများ သျှာမ်းကလေးများ အားလုံး ပညာတတ် စာတတ် နိုင်ငံတကာနဲ. ယှဉ်နိုင်အောင် စာကြိုးစားပါ ဒီကနေ. ပညာသင်ယူလေ.လာဆည်းပူးခြင်းသည် တစ်ချိန်ကြရင် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ် ကိုတည်ဆောက်ဖို. ဆိုပြီး ။ ကလေးများနေ.ကို နိုင်ငံ တကာနဲ. တူအောင် လက်နက်မျိုးစု သမိုင်းပေါင်းစု ကဗျာ ဆော.စရာ ပေါင်းစုနဲ. စီစီကားကား ကျင်းပ နိုင်ခဲ.ပါတယ်။စ၀်စိုင်းယီ၏ အဓိက ရည်မှန်းချက် စကားသည် သျှာမ်းလူမျိုးများကို စာတတ် ပညာတတ် များများတိုးပွားစေချင်သည်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို. သျှာမ်းလူမျိုးများသည် စာတတ်နဲ.နေသေးတယ် ပညာတတ်နဲ.သေးတယ် မူးယစ်ဆေးစွဲပြီး ဘ၀ ပျက်တာကအများကြီးပါ။ပြီးတော. ကျွန်တော်တို. RCSS/SSA ငှာနချုပ်ကို ပညာ လာရောက်လေ.လာသင်ယူချင်ရင်လဲ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ.ကျရောက်တဲ. ကျွန်တော်တို. ကလေးများနေ.ကို လွယ်တိုင်းလျန်းက လူငယ်များ ကလေးများ ပျော်ရွှင် တာတွေ.ရတော. အရမ်းဝမ်းသာမိ.ပါတယ်ခ။ လွယ်တိုင်းလျန်း ဆိုတာတစ်ချိန်က ယမ်းငွေ. သေနတ်သံ နေ.စဉ်မပျက် ကြားကြားနေရတယ်။ ကလေးတွေ ဆို မျက်ရည်နဲ. ဒူးတုတ်ပြီး ပျော်ရွှင်မူ. ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးမှန်းတောင် မခံစားခဲ.ရပါဘူး။အခုလို ကျွန်တော်တို. ငှာနချုပ် လွယ်တိုင်းလျန်းမှာ ကလေးများနေ. ကို အထူးစီစီကားကား ဦးဆောင်ကျင်းပ ပေးတဲ. သျှာမ်းပညာရေး ၀န်ကြီး စ၀်ပိာုင်းဖ နဲ. ကျောင်းဆရာ စ၀်စိုင်းဖူ နဲ. ဆရာ ဆရာမ များကို အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကလေး များနေ.ကို နှစ်တိုင်းလိုလိုကျင်းပ ခဲ.ပါတယ် ဒါပေမဲ. ဒီနှစ်ထက်လောက်တော. ပိုစီတာ မတွေ.ရပါဘူးလို. ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်က ပြောပြခဲ.ပါတယ်။အားလုံးပဲ မိုင်ဆွန်ခ ...
ယွꨓ်ꨵသင် သိုꨀ်းတꨯး ပွတ်းꨅꨤတ်း ꨬလꨳ ပီꨳꨓွင်ꨵသိုꨀ်းလွ...